Maxaan ka baran karnaa qisadii Cumayr Binu Sacdi
By ibrahim Aden shire August 03, 2017
In badan ayaa Qur'aanka kariimka ah lagu soo cel-celiyay qisooyin iyo sheekooyin dhacay quruumo hore. xikmada qisooyinka loo badiyay Eebe wuxuu ku sheegay inay tahay in aadanuhu ku cibro qaato. wixii dhib ah ee gaaray kuwii inaga horeeyay waynu ka leexan halka wixii dheef ah oo ay heleene aan ooga dayanayno.
sidoo kale qisooyinku waa nooc ka mid ah hababka kala duwan ee la isugu gudbiyo wanaaga. Culumo badan ayaa qabto inay tahay habka ugu awooda badan xaga gudbinta hadalka iyo gaarsiinta wacyiga. imaamu Maalik waxaa laga wariyay inuu yiri qisasku waa askar ka mid ah ciidamada Eebe weyne.
Inagoo ku dayanayo Qur'aanka ayaan halkaan waxaan ku soo gudbinayaa qiso aan is leeyahay aad ayay muhiim u tahay in la ogaado. Gaar ahaan waqtigaan ay wadaniyadi iyo qiyamkeeniba noqdeen kuwa af ka sheegad ah.
Cumayr Sacdi wuxuu dhintay aabihii isagoo aad u da' yar. ka dib hooyadii waxaa guursaday nin la oran jiray Julaas oo ka mid ahaa maal qabeenada magaalada Madiina. Julaas si wanaagsan ayuu koriyay Cumayr. wuxuu siiyay jeceyl waalidnimo wuxuuna si qurux badan u buuxiyay booski aabihii ka baxay.
Cumayr dhinaciisa waa dareensanaa sida adeerkii u wanaajiyay. Abaal badan ayuu u hayay wuxuuna u ixtiraamay sidii aabihii kole. Jeceylki uu helay wuxuu ku guday jeceyl la mid ah, wax maqal iyo inuu adeeco adeerki.
wuxuu xaalku sidaa ahaadaba, waqti ayuu suubanuhu damcay inuu duulo. maadaama la tabar yaraa wuxuu kaalmo waydiisatay saxaabadiisa. dhamaan ragii maal qabeenka ahaa waxay bixiyeen xoolo badan marki laga reebo Julaas oo aan kumi dhiibin. Cumayr wuxuu jeclaystay inuusan adeerkii ka harin sharafkaan iyo ducadaan maanta miiska u saaran. dhowr jeer ayuu si dhaga hadal ah ugu ak sheeg-sheegay waxay bixiyeen Cusmaan iyo rag kale.
Julaas waxaas dhag jalaq uma siin. maalin danbe ayaa iyagoo wada qadaynayo Cumayr yiri "adeer soo ma ogid in nabigu SCW xoolo dadka waydiistay" haa ayuu ku jawaabay Julaas. maxaad ooga qayb qaadan wayday ayuu yiri Cumayr. Maanta waxaa suuqa yaalo janno ee maalkaada maad ku iibsatid ayuu raaciyay Cumayr.
Julaas oo xumaanti qalbigiisa ku jirtay hayn kari waayay ayaa ku jawaabay "hadiiba kan (rasuulka scw ayuu ula jeedaa) wuxuu sheegayo ay xaq tahay inagaaba dameeraha ka liidano".
Cumar waa anfariiray. hadalki ayaa ku dhagay. wuxuu u qaadan waayay in ninkii u jeclaa qalbiga wax kale ku haystay. markuu qaddar yar aamusnaa ayuu yiri "Adeer ma jiro qof aan kaa jeclahay kaagana xurmo badnahay laakiin waxaad ku hadashay kalmad hadii aan sheegana fadeexad iyo ceeb kuu ah, haddii aan qariyana aan qiyaamay rasuulka iyo muslimiinta oo dhan. hadii ay is qabtaan karaamadaada iyo masiirka muslimiinta waxaan hormarinayaa kan muslimiinta. ka dibna wuu kacay oo wuxuu aaday xagga suubaha SCW si uu u ogaysiiyo sheegada dhex martay isaga iyo adeerkii.
La soco qisada qaybteeda labaad inshallah